umatshini osebenzayo hay umthengisi wesandla we-silage baling machine yenza i-baler yesikwere
Isandla esi sisebenza nge-hay baler sinokuzibalekela izinto ezifana ne-hay, ingca okanye amagqabi eplastiki, iphepha, ikhadibhodi, Inkunkuma yasezifama, njl,enezibonelelo ezininzi njengoko la mabhele ngokwesiqhelo esetyenziselwa ukugcina izinto ezingaphezulu okanye ukondla izilwanyana. ingca yimveliso yezityalo eziziinkozo amabhali enziwe ngengca asetyenziswa njengesixhobo sokwakha. Uhlaza yinto esele ihleli emva kokuba iinkozo kunye nomququ zisusiwe; ikwabizwa ngokuba sisiqu sesityalo. I-Afrika likhaya lezityalo ezininzi ezizezomdiliya, obu buchwephesha bunokuba luncedo phantse kulo naliphi na ilizwe.
Umatshini wokucheba ngesandla yinto yomntu omnye yokusebenza kwezixhobo zokusebenza kwefrimu ngokubonelela ngesixhobo sokuhambisa amanzi esiphephezelayo sentwasahlobo, ukwenza iibhali ngokufanelekileyo, ngoncedo lomlobi libekwe ngokugqibeleleyo ukulahla inkunkuma kwisibambiso kwaye iqalise ukunyanzeliswa. Uyilo oluhlengahlengiswayo lwenza kube lula kakhulu ukubopha amabhali enziwe ukugcina ilogile ivaliwe, ngaloo ndlela kuphuculwe ukusebenza kakuhle. Kwakhona, umsebenzisi unokuhambisa umatshini ngamavili ngokweemfuno zawo zokuvelisa.
Iimpawu zesitya sokusebenza esise-hay baler
1.Isakhelo esiphambili somatshini osebenzayo we-baler wenziwe ngentsimbi yesimo kunye neplate yentsimbi, Ayikwazi ukuqinisekisa kuphela umthamo wecompresser kumatshini wokulinganisa we-silage, kodwa kwakhona uqinisekise ngobomi benkonzo yomatshini. Ngaphandle koko, ikwagcina iindleko zokuthenga kubathengi bethu.
2.Incwadana yokutyala encinci hay baler, Isiphumo esikhawulezayo kunye nengeniso ephezulu ebanzi. Isikhuseli se-silage esitshiweyo sinokunciphisa ilahleko kunye nenkunkuma, Ilahleko yotshintsho ye-enzyme kunye nelahleko yokuhamba kokuhamba kwamanzi kuncitshiswa kakhulu,umgangatho we-silage ulungile, Umxholo ongaqhelekanga weproteyini uphezulu, kwaye isivuno sobisi siphuculwe kakhulu.
3.Ubungakanani begumbi lokunyanzelwa kunye nobungakanani bephakheji bunokwenziwa ngokwezifiso zabathengi.
4.Akukho mfuneko yamandla ,Umatshini wokulinganisa we-hay baling uqhutywa ngesandla ,ingasetyenziswa endaweni yokunqongophala kombane .
Iiparamitha zobugcisa zomatshini wokulinganisa i-silage baling
（Kg / h） Kuxhomekeke kumqhubi
Amandla Incwadi yezandla
Ubume bomthengisi Isikwere
Izixhobo zesicelo Kukho,umququ ,isilage ,ngeplastikhi njl